मैले म कहाँ आइपुगेँ भन्ने भेउ नपाउँदै उसले च्याप्प मेरो हात पक्डेर स्वागत गर्‍यो ।
स्वर्गको पनि स्वर्ग प्रेम बगैँचामा तिमीलाई स्वागत छ । यो प्रेमीहरूको बगैँचा हो । आज फोर्टिन फेब्रुअरी अर्थात् ‘द डे अफ भ्यालेन्टाइन ।’ धन्य छ प्रणेता तिमीलाई– आज मेरो वर्षौंदेखिको मक्सद पूरा भएको छ । वर्षाैंदेखिको तपस्या साकार भएको छ । मेरो पर्खाइको समयसीमा सकिएको छ ।
'प्रिय भ्यालेन्टाइन, म तिमीलाई प्रेम गर्छु !'
उफ, कस्तो लाजमर्दो, यौटा पुरुष पुरुषलाई नै प्रेम प्रस्ताव गरिरहेछ ! मैले स्थितिलाई स्वीकार्न नसकेर आँखा बन्द गरेँ ।
ऊ फेरि बोल्यो, ‘प्रिय, तिमीलाई पक्कै पनि लाग्यो होला म एक पुरुष हुँ । र, यौटा पुरुषले अर्को पुरुषलाई प्रेम प्रस्ताव राखिरहेछ । तिमी भ्रममा नपर । असलियतमा तिमी पुरुष हाेइनौ । म पनि पुरुष हाेइन । हाम्रा प्रणेताहरूलाई लागेको छ- प्रेमको लिङ्ग हुँदैन । यतिबेला तिमी आफ्नो लिङ्ग भए/नभएको आफैँ जाँच गर्न सक्छौ । यति कुरा हेक्का राख, कुनै बेला तिमी पुरुष थियौ र म नारी ।'
मैले आफ्नो लिङ्गको अवस्था जाँचे ।
ला, खै त मेरो लिङ्ग ! अहो, कस्तो आश्चर्य, मेरो त वास्तवमै लिङ्ग रहेनछ !
'चिन्ता नगर प्रिय, मेरो पनि लिङ्ग छैन । स्वर्गका देवहरूले सबैको लिङ्गछेदन गरिदिएका छन् । स्वर्गमा नारी पुरुष हुँदैनन् । यहाँ जात हुँदैन । यहाँ धर्म हुँदैन । यहाँ वर्ण हुँदैन । असलमा यहाँ केही पनि हुँदैन आत्माहरू शिवाय । हेर त हेर, मसँग के छ ? हेर त हेर, मेरो अवशेष कस्तो छ ? केही देख्यौ, मेरा स्तनहरू, याेनी, लामो कपाल....?'
उसले उसको समथर छाती देखायो । हैन, हैन देखाई । देखाई ? उफ कस्तो असहज, कस्तो अत्यास, कस्तो दोधार ! मैले फेरि मेरा आँखा बन्द गरेँ ।
'प्रिय भ्यालेन्टाइन, तिमी अलिकति पनि बिलम्ब नगरी मेरो प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर । तिमीले स्वीकार्न जति ढिला गर्छौ, त्यति नै अनिष्ट हुनेछ । त्यति नै आश्चर्यकाे भूमरीमा फस्नेछौ तिमी । आँखा बन्द गरेर असलियत लुक्दैन महाशय । दुनियाँ नेत्र नहुनेहरूले पनि उति नै देख्छन्, जति नजरवानहरूले देख्छन् । विश्वास लागेन ? सम्झ त त्यो जेल, जहाँ तिमीलाई भेट्न म दिनकै मेरो क्रूर बाबा (जेलर) का आँखा छलेर आउने गर्थेँ । तिम्रो समीपमा बसेर घन्टौँ टोलाउने गर्थें । तिमीलाई कति पनि याद छैन– मेरा आँखा थिएनन् त्यतिबेला । म त अन्धी थिएँ । तिम्रै दायाँ हातको प्रेमिल स्पर्शले मैले मेरा ज्योतिहरू पाएकी थिएँ नि ! सम्झ त सम्झ ।'
कस्तो स्वैरकल्पना ?
'पख, स्वैरकल्पना हैन । यो यथार्थ हो । तर, यथार्थमा पुग्न तिमीलाई समय लाग्नेछ । संसारमा सबैभन्दा धेरै बिक्ने भनेकै झुट हो । संसारमा सबैभन्दा सहज उपलब्ध हुने भनेकै झुट हो । सत्य पत्ता लगाउन त्यति सहज कहाँ पो छ र ! यथार्थ सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा हुन्छ प्रिय ।'
हँ ? कसरी यसले मेरो मन पढ्न सक्छ ? आच्या ! सक्छे ? म बोलेकै छैन, मात्र कल्पना गरिरहेको छु । र, उसले फटाफट मेरो मनोभावनाको जवाफ दिइरहेकी छे !
'प्रिय प्रेमी, स्वर्गमा कसैको पनि बोली हुँदैन । सबैले सबैको मन पढ्न सक्छन् । अहिले म बोलिरहेकी छैन, कल्पिरहेकी छु । तर, मेरो कल्पना तिमीले पढिरहेका छौ । सुनिरहेका छौ ।'
म मौन भएँ । मौन हुनु भनेको विकल्प नहुनु पनि हो ।
'प्रिय भ्यालेन्टाइन, आऊ तिमीलाई म स्वर्गको पनि स्वर्ग प्रेमबगैँचा घुमाउँछु यतिबेला । अँ, यौटा कुरा मनमा राख– तिमी यहाँका राजा हौ । प्रेमबगैँचाका निर्माता हौ । परिकल्पनाकार हौ । सबैले तिम्रो जयजयकार गर्नेछन्, स्वीकार गर्नू ।'
'आऊ । छिटोछिटो आऊ ।'
'उऽ त्यो परको रूखमा हेर त, के देख्यौ ?'
'यौटा मान्छे तलतिर हेरेर रमाइरहेछ ।'
'त्यो मान्छे होइन । भगवान् कृष्ण हुन् । कृष्णको असली रूप हो । तिनको हातमा हेर त, बाँसुरी छ । अब उनी चढेको रूखको फेदमा हेर, विशाल पोखरी छ । देख्यौ ? त्यहाँ गोपिनीहरू नुहाउँदै छन् । कति रमाइलो दृश्य छ है ?'
'साँच्चै ऊ भगवान् कृष्ण नै हो त ? स्वर्गमा पनि धर्म र भगवान् हुन्छन् र ?'
'हे हे, स्वर्गमा सबै समान छन् । अघि पनि भनेथेँ त, यहाँ जात, धर्म, भाषा, संस्कृति केही पनि छैन । सबैले सबैको भाषा बुझ्छन् । सबैले सबैको धर्म मान्छन् । सबैको समान अस्तित्व छ । खासमा भन्नुपर्दा स्वर्गमा प्राणी छैनन् । वनस्पति पनि छैनन् । आत्माहरू मात्र हुन्छन् । तिमी मान्छे होइनौ । म पनि मान्छे होइन । हामी आत्माहरू हौँ । ती रुखहरू होइनन् ती रुखका आत्मा हुन् ।'
'दोधारमा नपर । यी झिनामसिना कुरा हुन् । नअल्झ । शिखर चुम्नेले ढिस्काहरूमा अल्झिनु हुन्न । छिटोछिटो आऊ, हामीले अझै धेरै घुम्नु छ । बगौँचा विशाल छ । समय कम छ हामीसँग ।'
'समय पनि छ यहाँ ?'
'खासमा समय छैन । यहाँ न दिन हुन्छ न रात नै । तर, तिमी यहाँको पूर्णकालीन सदस्य भइसकेका छैनौ । तिम्ले प्रेमको शपथ नलिएसम्म जतिबेला पनि तिमी फिर्ता हुन सक्नेछौ ।'
नजानेको विषयमा नबोल्नु नै वेश, म सरासर उसको पछि लागेँ ।
हातको इशाराले पर झाडीतिर देखाउँदै भन्न थाली, 'हेर त त्यो झाडीमा गाँजा तानिरहेका भगवान् शिव हुन् । सँगै बसेकी चैँ पार्वती ।
'अहो रमाइलो पो रहेछ त !'
'हो त नि ।'
'अरू को-को छन् यहाँ ?'
'संसारका राम्रा मान्छेजति मरेपछि सबै स्वर्गमा आउँछन् । तर, स्वर्गमा आएर मात्र हुँदैन । यो त स्वर्गको पनि स्वर्ग हो ‘प्रेमबगैँचा’ । यहाँ आउन स्वर्गबाट ७ नम्बर फ्लाइओभर चढ्नुपर्छ ।'
'आहा ! यहाँ फ्लाई ओभर पनि छ ?'
'विल्कुल । स्वर्ग हो, स्वर्गमा नभएको के पो हुन्छ र ?'
'कसरी चढ्ने फ्लाइओभर ?'
'सहज छ । तर, तिमी कहाँ जान चाहन्छौ ?'
'बिनागन्तव्यको यात्रा हुँदैन यहाँ । यहाँबाट स्वर्ग जान १ नम्बर मेट्रो चढे पुगिन्छ । नर्कमा जानचाहिँ २ नम्बर । भर्खर अघि तिमी ७ नम्बर फ्लाइओभरबाट अवतरण भएका त हौ । मैले तिम्लाई फ्लाइओभरकै ढोकाबाट रिसिभ गरेकी हुँ ।'
'तर, मैले त केही थाहा पाइनँ ।'
'यात्रीले गन्तव्यको हेक्का राखे पुग्छ, बाटोको होइन । तिमी गन्तव्यमा आइपुगेका छौ । अब बाटो नखोज । यही बिन्दुबाट तिम्रो यात्रा सकिएको छ । नभुल, गन्तव्यमा पुग्नु भनेको यात्रा टङ्गिनु पनि हो ।'
'उसो भए हामी स्वर्ग पुगेर आऊँ न एकपटक ?'
'सहज छैन, जाने टिकट त भेटिन्छ । आउने पाइँदैन ।'
'टिकट कहाँ पाइन्छ ?'
'स्वर्गको पनि स्वर्ग प्रेमबगैँचामा चाहिँ टिकटघर यात्रीको मन हो । यहाँ आइपुगेको आत्माले एक इच्छामै आफूले चाहेको ठाउँ जान पाउँछ । १ नम्बर मेट्रो चढ्नचाहिँ तिमीले एक जुनी राम्रो मान्छेको अवतार लिएर पृथ्वीमा जन्म लिनुपर्छ । तर, स्वर्गबाट यहाँ आउने ७ नम्बर फ्लाइओभर चढ्नका लागिचाहिँ अरू स्वर्गका राजाहरूको भर पर्नुपर्छ । उनीहरूले तोकिदिएको अवतार लिएर जन्मनुपर्छ । यसरी जन्मदा नराम्रो अवतार लिए नर्कमा जान पनि सकिन्छ । यदि झुक्किएर नर्कमा जाकिए ८३ हजार नम्बरको माइक्रो चढ्नुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा ८३ हजार जुनी लिनुपर्छ । लाखौँ अर्बौं वर्ष लाग्न सक्छ फर्किएर यहाँ आउन ।'
'अहो ! कति भयङ्कर नियम ?'
'यो नियम अरुतिरको हो । यहाँको नियमको निर्माता तिमी हौ । तिमी आफ्नो नियम राख्न सक्छौ । तर, त्यसका लागि तिमीले स्वर्गलोकका देवहरूसँग युद्ध लड्नुपर्नेछ । वैचारिक लडाइँ ।'
'पछि भन्छु । आऊ पहिले बगैंचा घुमौँ । तिमीलाई जापानिज कृषि वैज्ञानिक हिदिसाबरो उनोको कुकुर हाचीको याद छ ?'
'कुन ? अँ, अँ त्यो हराएको कुकुर ? जसले नौ वर्षसम्म आफ्नो मालिक कुरेको ?'
'हो हो, त्यही कुकुरको आत्मा हो उऽ त्यो परको चाहिँ । कैयौँ वर्षदेखि ऊ यहाँ उसको मालिकको आत्मा खोजिरहेछ ।'
'कहाँ छ त उसको मालिकचाहिँ ?'
'उसको मालिक भर्खर स्वर्गबाट ६ नम्बर फ्लाइओभर चढेको छ । यतिखेर ऊ पृथ्वीको नेपाल भन्ने देशमा यौटा डाक्टरको अवतारमा छ ।'
'अनि अरू को को छन् त यहाँ ?'
'तिमीलाई रोमियो र जुलियट थाहा छ ?'
'तिनी त सेक्सपियरका नाटकका पात्रहरू हैनन् र ?'
'हाे । तर, पात्रहरू मात्रै भए पनि आत्मा त सबैको हुन्छ नि । उनीहरू पनि यहाँ स्वर्गको पनि स्वर्ग प्रेमबगौँचामा आइपुगेका छन् । यहाँ आएर भेट भएको हो उनीहरूको । कति खुसी छन् उनीहरू यहाँ । एकअर्काको साथ कहिल्यै छाड्दैनन् ।'
'अरू को-को पात्रहरू छन् त यहाँ ?'
'देवकोटाको मुनामदन थाहा छ ? उनीहरूले त सानाे झुपडी पनि बनाइसके । सधैँ यहीँ बस्ने अरे । लैलामजनु पनि यहीँ छन् । क्लियोपेट्रा र मार्क एन्थोनी, लान्सलट र गुयुनिभेरा, पेरिस र हेलेना, निपोलियन र जोसेफ... सबैसबै यहीँ छन् । सबैले तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।'
'मेरो ! किन ?'
'किनभने तिमी प्रेमको जननी हौ । स्वर्गको पनि स्वर्ग प्रेमबगैँचाको निर्माता हौ । परिकल्पनाकार हौ ।'
'हँ ! कसरी ?'
'पछि भन्छु । आउ पहिले बगैँचा घुमौँ । तिमीलाई थाहा छ एआर रहमान, एआर रहिम ? उनीहरू पनि यहीँ छन् ।'
'राजाले यिनीहरूलाई प्रेमको महत्त्व सिकाउनू भनेर विशेष यानमार्फत यहाँ पठाएका हुन् । उनीहरू आजकल प्रेमकला सिक्दै छन् । उनीहरू यहाँ प्रेमको नवाज पढ्छन् ।'
'तिमीलाई थाहा छ, यहाँ आफ्नी पत्नी र यौनजीवन त्यागेका भगवान् बुद्ध पनि आफ्नी पत्नीसँग आइपुगेका छन् ।'
'हाहा... ती बुढाले त सबैथोक परित्याग गरेका थिए त ? फेरि कसरी प्रेममा परे ?'
'रोचक छ कहानी । खासमा उनी जिउँदो हुँदा मोक्ष होइन, प्रेमको खोजीमा थिए । उनले केही पनि त्यागेका थिएनन् । उनले हरेक कुरालाई प्रेम गर्थे । हरेक कुरासँग भोग गर्थे । जस्तो कि काटमार हत्या हिंसा नगर्नु भनेको प्रेम गर्नु हो । असलियतमा उनी प्रेममा चरमोत्कर्ष खोजिरहेका थिए । खासमा मान्छेले बुद्धलाई प्रेमका भगवान् भनेर पुज्नुपर्ने हो । यहाँ त जिजस पनि उनकी श्रीमतीसँग बस्छन् । तर, उनले उनकी श्रीमती गोप्य राखेका छन् । कतिले भन्छन्- उनकी आमा नै उनकी श्रीमती हुन् । तर, यहाँ श्रीमती हुनु र नहुनुसँग कुनै सरोकार छैन । यहाँ त प्रेम मात्र गर्न छुट छ । स्वर्गलोकका देवताहरूको बुझाइ छ– प्रेम र यौन फरक कुरा हुन् । प्रेममा यौन हुनु हुँदैन । प्रेममा वासना हुनु हुँदैन । तर, यो तर्कसँग यहाँका सबै असन्तुष्ट छन् । यहाँका धेरै आत्मा यौन पनि गर्न पाउनुपर्ने आन्दोलनको तयारीमा छन् । खासमा उनीहरूले तिमीलाई पर्खनुको मुख्य उद्देश्य यही हो । तिमी यहाँका राजा हौ । तिमीले यहाँका प्रेमीहरूले यौनको सुविधा पनि पाउनुपर्छ भनेर यहाँका आत्महरूको आवाज देवतालोकमा पुर्‍याउनेछौ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ । तिम्रो सहयोगमा उनीहरू आफ्नो लिङ्ग फिर्ता भएको हेर्न चाहन्छन् ।'
'उनीहरू आफैँ देउता हुन् नि ?'
'हो । उनीहरू मानव लोक पृथ्वीका देउता हुन् । पृथ्वीका रचयिता हुन् । उनीहरूले पृथ्वीमा मानव जीवनको निर्माण गरे । जीवन भन्नु मृत्यु पनि हो । बाँच्नु भनेको एक दिन मर्नु हो । उनीहरू पनि मरे । मरेपछि सबै आत्मासमान हुन्छन् । त्यसै भए ।'
'यो त बुझेँ । तर, म त प्रेममा यौन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु ।'
'हँ ! किन ?'
'यौन त गृहस्थीको सूचक हो । यौन भएपछि सबैमा भोक जाग्छ । कामवासनाले स्वार्थी बनाउँछ । यहाँका सबैले मातापिता बन्ने स्वार्थ राखे भने ?'
'हे हे.. यौटा सेक्रेट भनौँ ? यहाँका बगैँचामा गुलाब छैन । गुलाब नभएको प्रेमको के मजा ? खासमा म पनि आमा बन्न चाहन्छु । म यौटा सुन्दर फूललाई जन्म दिन चाहन्छु । प्रेमको फूल गुलाबको । स्वर्गको पनि स्वर्ग प्रेमबगैँचामा प्रेमको प्रतीक गुलाबको अस्तित्व चाहन्छु ।'
'यौटा कुरा सोधौँ ?'
'किन तिमी स्त्रीहरू प्रेमसँग विवाह जोड्छौ ? यौनसँग जन्म, जन्मसँग मृत्यु, भोक र यौन जन्म र मृत्युका लागि अनिवार्य छ । यी सबै प्रक्रिया यहाँ पनि हुने हाे भने याे जीवन प्रक्रिया भइगयो नि, होइन र ? हामी आत्माहरू हौँ भन्या होइन ? प्राणीको नियम नै आत्मामा लागू भए यसको के अर्थ त ? पृथ्वीकै नियम लागू भए स्वर्गको के महत्त्व ? फेरि हाम्रो लिङ्ग पनि त छैन । मैथुनका लागि लिङ्ग हुन जरुरी छ ।'
'कति मीठो तर्क । एक तर्कले नै मेरो मन जित्यौ । प्रेमीहरू यस्तै हुन्छन् । हरेक कुरामा जित्न र हार्न सक्ने क्षमता राख्दछन् । यो प्रेमको विशेषता हो । मलाई गुलाब होइन, प्रेम भए पुग्छ । खासमा प्रेममा हारजित हुँदैन । यो कुरा तिमी भोलिको तिम्रो सम्बोधनमा सबैसामु राख्न सक्छौ ।'
'तर म तिमीलाई के आधारमा प्रेम गरौँ ? म त तिमीलाई चिन्न पनि चिन्दिनँ ।'
'खासमा प्रेमको परिचय पनि त हुँदैन । प्रेम त अनुभूति हो । यी हेर त हाम्रो मन मिलेको । अघिदेखि हामी एकअर्काको भावनासँग, तर्कसँग रमाइरहेका छौँ । तिम्रो सोचसँग म मजा लिइराखेकी छु । तिम्रो समीपमा म हराइराखेकी छु ।'
'तर मलाई त त्यस्तो केही भएको छैन ।'
'रुक.. यसको अनुभूति म तिमीलाई दिलाउँछु ।'
मेरो जवाफ नदिइकन ऊ गायब भयो । होइन होइन, स्त्री हुँ भन्थी गायब भई ।
स्थितिले यूटर्न लियो ।
ऊ हराएपछि म पूराका पूरा शून्य भएँ । बगैँचाका सबै रूख बुट्यानहरू मेरै सामुन्नेमा आएर उभिए । अघिदेखि प्रेममा हराइरहेका प्रेमीहरू मेरै सामुन्नेमा आएर मलाई प्रणाम गर्न थाले । सबैले मेरो उपस्थितिको जयजयकार गर्न थाले । प्रेम बगैँचासम्म आउँदा बाटोमा कस्ताकस्ता दुःख पाएको ? कति जुनी मानव भएको ? कुन जुनीमा कुन प्राणी भएको सोध्न थाले ?
उफ कस्तो सन्नाटा ? यत्रो कोलाहल छ । यत्रा शुभचिन्तकहरू छन् । यत्रो हर्कबढाइँ भइरहेछ । तर, म किन मौन ? वास्तवमै मलाई कता-कता कहाँ-कहाँ खै के भएजस्तो ? केही नपुगेजस्तो ? कोही छुटेजस्तो अनुभूति हुन थाल्यो । म भीडमा त्यही यौटा आत्मा खोज्न थालेँ, जसले मेरो दिल बुझ्न सक्छ । मेरो तर्कहरूको जवाफ दिन सक्छ ।
मैले कृष्ण राधिकाको अनुहारमा खोजेँ, अहँ ऊ थिइन त्यहाँ । लैलामजनू, रोमियो जुलियट सबैको अनुहारमा हेरेँ, अहँ कतै ऊ भेटिइन । बरू गोपिनीहरू भेटिए । शुयोगवीर र सकम्बरी भेटिए ।
मलाई कताकता लाग्न थाल्यो भीडभाडको बीचमा एक्लिन सक्नु प्रेमको गुण पो रहेछ । प्रेमी हुन सक्ने योग्यता पो रहेछ ।
म तड्पिएर चिच्याउन थालेँ, 'ए आत्मा, तिमी कता छ्यौ, जो मेरी प्रेमिका भएको दाबी गर्छ्यौ ? खासमा को हौ तिमी ? आऊ, यतिबेला मलाई तिम्रो जरुरी छ । आऊ, आऊ ।'
'प्रेम भन्नु नै आफ्नो मनलाई बुझ्नु हो । आफ्नै मनलाई अनुभूत गर्नु हो । तिमीले आफूलाई बुझ्यौ । आफूलाई बुझ्न सक्ने प्रेमीले कहिल्यै धोका दिँदैन । म तिमीलाई प्रेम गर्छु । चिन्ता नगर, म तिम्रौ सामुन्नेमा छु ।'
फेरि ऊ देखा परी ।
म हर्षले गद्‌गद् भएँ ।
'तर, म तिमीसँग प्रेम गर्नुअघि म तिमीलाई चिन्न चाहन्छु । को हौ तिमी ?'
'सुरुमै भनेकी थिएँ त, म एक जेलरकी अन्धी छोरी हुँ ।'
'मतलब म तिम्री प्रेमिका ।'
'मैले त अझै बुझिनँ नि ?'
तेस्रो शताब्दीको कुरा हो । तिमी एन्सियन्ट रोमको यौटा क्याथोलिक चर्चमा धर्मगुरु थियौ । एक सन्त थियौ । तिम्रो नाम थियो सेन्ट भ्यालेन्टाइन । त्यतिखेर रोमको शासक थिए, क्लाउडियस द्वित्तीय ।क्लाउडियस एकदमै खतर्नाक शासक थिए । एक दिन उनलाई लाग्यो- मेरो राज्यका सैनिकहरू स्त्रीका कारण कमजोर भएका छन् । यौनले उनीहरूको बहादुरीमा कमी देखिन थालेको छ । यसरी त म हार्नेछु । शासकले मर्न जान्दछ, हार्न जान्दैन ।
उनले तत्कालै आदेश दिए- आजदेखि मेरो राज्यका कुनै पनि सैनिकले विवाह गर्न पाउने छैन । प्रेम गर्न पाउने छैन । स्त्रीसँग भेट्न पाउने छैन ।
शासकको आदेश सुनेर एकाएक राज्य निराश भयो । राज्यका सबै नागरिक निराश भए । सैनिकहरूमा ऊर्जा हरायो । यस्तो देखेपछि तिमीलाई बढी माया लागेर आयो । सैनिकहरूलाई गोप्य रूपले चर्चमा बोलाएर सुन्दर स्त्रीसँग विवाह गरिदिन थाल्यौ । तिम्रो यो चाला क्लाउडियसले थाहा पाइहाले । त्यसपछि तिमीलाई जेल चलान गरियो ।
थाहा छ ? तिमीलाई राखिएको जेलमा जेलरको काम मेरा बुबाले गर्नुहुन्थ्यो । म अन्धी थिएँ । जेलमा मेरो कोही साथी थिएन । म विल्कुल एक्ली थिएँ । तिमी जेलमा आएपछि मेरो साथी तिमी भयौ । म तिमीलाई दिनकै भेट्न थालेँ । हामी प्रेममा पर्‍यौँ ।
एक दिन तिम्रा प्रेम भरिएका हातले मेरो आँखाहरूमा स्पर्श गर्दा मेरा ज्योतिहीन आँखाहरूमा ज्योति भरियो । म देख्न सक्ने भएँ । प्रेमले मलाई नेत्रज्योति दियो ।
मेरा आँखाहरूमा ज्योति भरिएको केही दिनमै तिमीलाई मृत्युदण्ड दिइयो । र, भायाफ्लामिनिया भन्ने सडकको यौटा पुलछेउमा गाडियो । थाहा छ तिमीलाई, तिमीलाई मृत्युदण्ड दिएपछि त्यही दिन मेरो ठेगानामा एउटा पत्र आइपुगेको थियो । त्यो पत्रमा लेखिएको थियो, 'यू आर भ्यालेन्टिन' । मैले थाहा पाइहालेँ, त्यो पत्र तिमीले मेरा लागि लेखेका थियौ । यसरी त्यो दिन यौटा सन्तले प्रेमका खातिर आफूलाई बलिदान गरेको थियो । त्यो दिन थियो १४ फेब्रुअरी । यो कुरा म कहाँ बिर्सन सक्थेँ र ?
अर्को कुरा पनि भन्छु तिमीलाई, मैले तिमीलाई कहाँकहाँ मात्र खोजिनँ ? कतिकति मानव जुनीको अवतार लिएँ । मेरै भड्किएको आत्मा थियो जुलियटको आत्मा, मेरै आत्मा थियो मजनुको आत्मा । म नै हुँ मुना, म नै हुँ पागल बस्तीकी मार्था । तर दुर्भाग्य, ती मसँग प्रेम गर्ने कुनै तमाम प्रेमीहरूमा तिम्रो रूप थिएन । तिम्रो प्रतिछाया थिएन । त्यसैले कसैसँग मेरो दीर्घकालीन मेल भएन ।
उसको कुरा सुनेर म मौन भएँ । मलाई कति पनि उसको कुरामा सत्यता लागेन । तर, इतिहास भनेकै विश्वास हो । मैले मौन दृष्टिले उसलाई हेरिरहेँ । मौन हुनु भनेको विश्वास गर्नु पनि हो ।
'तिमी वास्तवमै बुद्धु छौ', नजिकैको एक वृक्षबाट उसले एउटा पात टिपी र मतिर लम्काई । पातमा लेखिएको थियो, 'योर भ्यालेन्टाइन ।' हो त्यही पत्र थियो त्यो जुन मैले जेलमा हुँदा लेखेको थिएँ ।
बल्ल सम्झना आयो । मेरा गह भरिए । तत्कालै मैले उसलाई अंकमाल गरेँ । ठूलो स्वरमा चिच्याएँ, ‘म तिमीलाई प्रेम गर्छु ।’
एकाएक बगैँचामा हर्ष उल्लास छायो । सबैले विजयको झ्याली पिटे । हर्कबढाइँ गरे । आतिसबाजी गरे । पटाकाहरू पड्काइए । उपहारहरू साटासाट गरे ।
संयोगले आज त्यही दिन रहेछ, जुन दिन सेन्ट भ्यालेन्टाइनको हत्या गरिएको थियो । अर्थात् फोर्टिन फेब्रुअरी- द डे अफ भ्यालेन्टाइन । आज फेरि हाम्रो मिलन भएको दिन ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १, २०७७, ०८:२५:००